Shareecada Islaanka iyo dareenka insaanka! – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Waa qalinka: Mustafa Cali
Hormuudka qoralada fikirka cusub
Markii lagaso tago waajibaatkii akhlaaqiga ahaa ee insaan walbo ilaalintiisa laga rabay, waxaa jiro waajibaat kale oo badan oo shareecada islamka ey fartay dadka aaminsan iney sameeyaan iyo kuwo kale oo ey ka reebtay iney Sameeyaan.
Taas oo marka qofka muslimka ah uu sameyo uu dareemo gudasho masuuliyad marki uu katagane ku dhaliso ka gaabis masuuliyad.
Hadaba sidee ayey sameyn ugu yeelatay shareecada dareenkii dambiga ee dabiiciga ahaa?
Si aad ufahamto sameyntaas waxan ubaahanahay inan dambiga ukala saarno mid dabiici ah iyo mid aan dabiici aheyn.
Dambiga dabiiciga ah waakan taabanaayo insaaniyada qofka, dambigaas oo marki uu qofka sameyo uu dareemayo xumaan taas oo ukeento inuu ka qoomameeyo wixi uu sameyay sida beenta, khiyaanada, tuugnimada, iyo ku xadgubidda dadkale.
Dareenka nuucaas ah waa dareen dabiici ah waayo xitaa waxa dareemo dad aan muslim aheyn amaba aan diin aaminsaneyn.
Waxaa kale oo jira dambi aan dabiici aheyn, waa kan kadhasho ka tegidda waxyaabihi shareecada amartay sida salaadda Iyo soomka ama sameynta waxyaabihi lagaa reebay sida cunista hilibka doofaarka.
Waxad arkeysaa qof muslim ah oo khiyaano sameynayo ama been sheegaayo, lkn aanan cuneynin hilibka doofaarka.
Haddaba saameyntaas waxan kuso koobi karnaa dhowr qodob:
1.in qofka uu dareemo dambi shareecada darteed (tusaale wuxuu katagay salaad)waxey dabooleysaa dareenkii dambiga dabiiciga ahaa ee qofka, ama ayadoo gaaban: in qof ka dareemo danbi aan dabiici aheen, waxaay dabooleysa dareenka danbiga dabiiciga ah.
Tusaale inuu isdhaho marba hadad ilaah amarkiisa fulin weysay maxa waxkale kaa galay
2. In badan oo shareecada kamid ah waxey ka hor imaaneysaa waajibaatkii akhlaaqiga aha sida jaceylkii waalidka.
Tusaale qof waalidkiis uu gaal yahay majeclaan karo sida aayadan ku cad لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانو آباءهم
Ma.arkeysid qoom ilaah iyo aakhiro rumeyay oo jeclaanayo qof ilaah iyo rasuulkiisa la colloobay.
3. Sameynta qofka uu usameyo wanaag shareecada amartay darteed wuxuu dilayaa dareenkii insaanka ee dabiiciga ahaa, tusaale qofka muslimka ah marka uu dhiibayo zakada uma dhiibayo insaaninimo darteed lkn wuxuu udhibayaa cabsi uu ka cabsanayo naar, Sidaas ayey shareecadu uriixday dareenkii dabiiciga ahaa ee qofka muslimka ah